Nin u dhashay dalka France oo si layaab leh u galay System ka Meleteri ga dalka Indonesia oo aad loo ilaaliyo. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Dhacdooyinka » Nin u dhashay dalka France oo si layaab leh u galay System ka Meleteri ga dalka Indonesia oo aad loo ilaaliyo.
Nin u dhashay dalka France oo si layaab leh u galay System ka Meleteri ga dalka Indonesia oo aad loo ilaaliyo.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 21-07-16 10:35 AM Nin u dhashay dalka France ayaa la qabtay isaga oo xadayo macluumaadka Militari ga dalka Indonesia, xilli uu ninkan ciyaarayey ciyaarta caanka ka noqotay telefoonada caqliga badan (Smart Phones) ee qabsaday xilligan caalamka.
27 Sanno jirkan lagu magacaabo Romain Pierre ayaa la qabtay kadib markii uu si fudud ku galay nidaamka aadka loo ilaaliyo oo ay isticmaalaan Militeriga dalka Indonesia, sida uu u sheegay Yusri Yunus wakaalada wararka ee AFP.
“Waxa uu ceyrsi ugu jiray game ka Pokemons” Yunus ayaa sidaas yiri, waxa uuna isku dayayey inuu ku dhaco xogta qaab online ah.
Ninkan reer France oo ku nool magaalo xeebeedka Cirebon ayaa isku dayey inuu is qariyo kadib markii ay ogaadeen khabiirada maamusha Xogta Indonesia, waxaase la sii daayey saacado kadib markii ay xereen Booliska dalkaasi iyaga oo wareysi badan la yeeshay.
Nin u hadlay Militeriga dalkaas ayaa sheegay in dadka qaar ay sameeyaan xatooyo iyaga oo isticmaalayo Game yada, waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in maxkamad lasoo taagi doono cidii lagu arko falkan oo kale.
Waxaa xusid Mudan in Pokemon oo yaalay Internet ka wax aan sidaas ugu badneyn labo isbuuc ayaa durba la dareemay inuu saameyn badan ku yeeshay caalamka, waxaa bartamihii todobaadkii aynu kasoo gudbnay dalka Mareykanka ugu geeriyootay labo qof iyaga oo ciyaarayo kasoo dhacay saqafka kore ee guri ka koobnaa 12 dabaq.